Vision & mission statement – translated to Burmese language | NZ Buddhist Council
နယူးဇီလန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကောင်စီ
နယူးဇီလန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကောင်စီသည် နယူးဇီလန်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးစုများအတွင်း အကြောင်း အရာအချက်အလက်များ မျှဝေခြင်း၊ အပြန်အလှန်လေးစားခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရင်းနှီး ချစ်ခင်မှုကို အားပေးပါသည်။
နယူးဇီလန် ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်စီကို ၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၁၄-ဖွဲ့ အစည်း အဝေးတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်ဖလှယ် ခြင်း၊ အဖွဲ့များအတွင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သော တူညီသည့် အရေးပါကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသတိုင်းရှိ လူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ရှောက်ကြခြင်းတို့အတွက် အတူတကွ ပူးတွဲဆောင်ရွက်ကြစဉ် အများ သဘော ဆန္ဒမှ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သော ကောင်စီဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး အကျိုးရှိရန်အတွက် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော တူညီသည့် အရေးပါကိစ္စရပ်များကို ကူညီထောက်ပံ့ရန်
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဗုဒ္ဓဓမ္မများကိုနားလည်၊ ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ပြန့်ပွားရေးအတွက် အတူ တကွဆောင်ရွက်ကြရန်
နယူးဇီလန်ရှိ ကျယ်ပြန့်သော ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် အခြားသော ဘာသာရေး အဖွဲ့များ၊ သတင်းဌာနများ၊ အစိုးရနှင့်အများပြည်သူများ တိုးတက်နားလည်မှုရှိအောင် ဆောင် ရွက်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကို ကူညီနိုင်မည်ဆိုလျှင်၊ သို့မဟုတ်၊ သင့်အနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောချင်တာရှိမည်ဆို လျှင် သိရှိနိုင်ဘို့ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
This translated version is for your convenience.
The official version of this website is the English one. If any questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated parts of this website, please refer to the English version for clarification.